ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Huntingdon, Cambridgeshire
Real Estate Listings: » Commercial Real Estate » Industrial premises » GB » Cambridgeshire » Huntingdon » ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် Huntingdon, Cambridgeshire1
1 - 1 ၏ 2
စာပို့သင်္ကေတ: Pe28 5sb
အင်္ဂါရပ်များ: Good access to A1(M), Good parking provision,3phase power, 4m eaves, The EPC is currently an E (117). A copy of the EPC is available on our website., Available by way ofanew lease on terms to be agreed.
အဆိုပါဝုဏ်အတွင်းလက်ရှိတွင်နှစ်ခုဆက်သွယ်မှုအကြားတံခါးကိုနှင့်အတူအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားကျန်ကြွင်းသောအရပ်စက်မှုဇုန်၏အဆုံးပါဝင်သည်။ လိုအပ်ပါကအိမ်ခြံမြေသည်ကားရပ်နားရန်နေရာများအပြင်နှစ်ဖက်စလုံးမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အပြင်ပမာဏများစွာပါ ၀ င်သည်။ သိုလှောင်ရုံတွင်ဓာတ်ငွေ့မီးအပူပေးစက်နှင့် WC တစ်ခုစီတပ်ဆင်ထားသည်။
အမျိုးအစားရွေးပါAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Studios Cottages BungalowsLand lots Residential LandGarages and parking places Parking garagesCommercial Real Estate Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Home Improvement Contractors Cleaning Contractors Design ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents
Cambridgeshire (အတိုကောက် Cambs ။ ) သည်အင်္ဂလန်၏အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပြီးမြောက်ဘက်တွင်လင်ကွန်းရှိုင်းယား၊ အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် -Norfolk၊ အရှေ့ဘက်တွင် Suffolk၊ တောင်ဘက်တွင် Essex နှင့် Hertfordshire နှင့်အနောက်ဘက်ရှိ Bedfordshire နှင့် Northamptonsire တို့ဖြစ်သည်။ ကိန်းဘရစ်မြို့သည်ခရိုင်မြို့ဖြစ်သည်။ Modern Cambridgeshire ကို ၁၉၇၄ တွင် Cambridgeshire နှင့် Isle of Ely နှင့် Huntingdon နှင့် Peterborough တို့၏ပေါင်းစည်းမှုအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးယခင်က Cambridgeshire (Isle of Ely အပါအ ၀ င်) ၏သမိုင်းဝင်ခရိုင်ကိုဖုံးအုပ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ Huntingdonshire နှင့် Soke ၏သမိုင်းဝင်ခရိုင်ကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ Peterborough ၏, သမိုင်းဝင် Northamptonshire ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ၎င်းတွင် Silicon Fen ဟုလူသိများသောဒေသအများစုရှိသည်။ အဆိုပါခရိုင်ယခု Cambridgeshire ကောင်တီကောင်စီနှင့် 1998, ကတည်းကသီးခြားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအခွင့်အာဏာဖွဲ့စည်းသော Peterborough စီးတီးကောင်စီအကြားခွဲခြားထားတယ်။ ခရိုင်တွင်ခရိုင်ကောင်စီ (၅) ခု၊ ကင်းဘရစ်စီးတီးကောင်စီ၊ အရှေ့ကန်ဘီးဒီးယားခရိုင်ကောင်စီ၊ ဖင်လန်ခရိုင်ကောင်စီ၊
109,750 Pound £ / လစဉ်
25,000 Pound £ / လစဉ်
10,350 Pound £ / လစဉ်
5,500 Pound £ / လစဉ်
9,920 Pound £ / လစဉ်
အနီးရှိကျောင်းများ Pe28 5sb